1994 – Year – Channel Myanmar
Of Love and Shadows (1994) [18+] Of Love and Shadows (1992)ဒီဇငျဘာလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာမှေးနရေ့ကျမွတျမင်ျဂလာကရြောကျသှားခဲ့တဲ့ တဈခတျေတဈခါက ကြှနျတျောတို့ရဲ့အလှနတျဘုရားမ၊ ပုရိသတှရေဲ့နှလုံးသားကို ရုပျရှငျလောကထဲစဝငျလာတညျးက သိမျးကွုံးယူပဈခဲ့တဲ့မတျမတျ ဂနြီဖာကျောနယျလီရဲ့ ကားကောငျးလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ဒီဇာတျကားလေးက တဈခွားအခြိနျမှာကွညျ့မယျဆို ရိုးရိုးတမျးတမျးပဲ မတျမတျရဲ့အလှအပကိုပဲ သီးသနျ့ခံစား၊ ဒါပမေဲ့ ဇာတျကှကျကိုသိပျခံစားလို့မရမယျ့ကားမြိုး‌ပါ။ အဲလိုပမေဲ့ အခုတော့ ကြှနျတျောတို့ ဒီအခွအေနကွေီးနဲ့ဆိုတော့ တျောတျောကွညျ့ရကိုကျတဲ့ကားဖွဈသှားပွီမို့လို့ပါ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ခြီလီနိုငျငံလေးကို လောဘဇောတကျနတေဲ့ အာဏာရူးဗိုလျခြုပျကွီးက အာဏာကောကျသိမျးတဲ့အကွောငျးနဲ့စတယျပေါ့ဗြာ။ အဲလိုအာဏာသိမျးတဲ့အခြိနျမှာ ‌အီရငျးနဲဆိုတဲ့သတငျးထောကျမလေးကြှနျတျောတို့မတျမတျရဲ့‌အမကေ ဘောမကွီးလုံးလုံးပဲဆိုပါတော့ဗြာ။အဲဒီတော့ အဲလိုအခွအေနမြေိုးမှာ သတငျးထောကျမလေး အီရငျးနဲကို လီရယျဆိုတဲ့ ဓာတျပုံဆရာတဈဖွဈလဲ စိတျပညာရှငျဒေါကျတာလေးက အာဏာရှငျရဲ့မကောငျးကှကျတှကေို အတူထုတျဖျောဖို့ကွိုးစားကွတာကို ဒေါသအလိပျလိပျထှကျလိုကျ၊ မတျမတျကို မွငျပွီးစိတျပွနျငွိမျလိုကျနဲ့ကွညျ့ရမယျ့ကားမြိုးပါ။ ဒီကားက သူ့အဖျောအခြှတျအလှအပခနျးတှလေညျးမြားလို့ မိသားစုနဲ့မကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးပါ။ ဒါကွောငျ့ 1994 ခုနှဈမှာထှကျရှိခဲ့တဲ့ Of Love and Shadows လေးကို ဒေါသထှကျရရငျး စိတျလညျးပွနျလြှော့ရရငျး ခံစားကွညျ့ရှုပေးလှညျ့ပါဦးခငျဗြာ။Size - 1.6GB, ...
The Land Before Time: The Great Valley Adventure 1994 THE LAND BEFORE TIME REVIEW Channel Myanmar ပရိတျသတျတှအေတှကျ ဒီတဈခါ တငျဆကျပေးခငျြတာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှဈက စတငျထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ The Land Before Time ဆိုတဲ့ ကာတှနျးဇာတျလမျးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးအကွောငျးမပွောခငျ သိစခေငျြတာလေးတဈခုရှိပါ တယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတျလမျးကို ဖနျတီးသူတှအေကွောငျးပါ …. Producer တှကေတော့ ဂြေျာ့ဂျြလူးကပျဈ နဲ့ စတီဗငျစပီးဘာ့ဂျ တို့ ဖွဈကွပွီး ဒါရိုကျတာကတော့ ဒှနျဘလုသျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့လို ရုပျရှငျအကြျောအမျောကွီး ၃ ယောကျဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမြိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတဈခုတညျးသာ ရှိတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ ကမ်ဘာဦးအစက ဒိုငျနိုဆောလေးတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှငျသနျရပျတညျမှု ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲမှုတှေ အကွောငျးကို ဇာတျအိမျတညျပွီး လဈတဲဖု စပိုကျချ ဆယျရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုငျနိုဆော သူငယျခငျြးလေးတဈစုရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ရိုကျပွထားတာပါ။ ကာတှနျးကားဆိုပမေယျ့ …… ကမ်ဘာဦးတုနျးက ...
The Land Before Time: The Great Valley Adventure 1994
Ashes of Time (1994) Ashes of Time (1994)===============IMDb Rating - 7.2/10#Unicodeခမျးနားကွီးကယျြမှုတှဟောလညျး အခြိနျကာလရဲ့ တိုကျစားမှုတှထေဲ လှငျ့ပြောကျပကျြပွယျကွရတာပါပဲ။အခြိနျစီးကွောငျးတှကွေား လှငျ့မြောပကျြပွယျနကွေတဲ့ ပွာမှုနျတှထေဲ အခမျးနားဆုံးလူသားတှလေညျးမလှတျကငျးခဲ့ပါဘူး။ ဒီရုပျရှငျမှာ တရုတျပွညျရဲ့ နာမညျကြျော Art House Directors ဝေါငျကာဝေးဟာလှငျ့ပွယျခဲ့ပွီးသား နာမညျကြျောတှရေဲ့ အတိတျဆီ ကြှနျတျောတို့ကို ပွနျချေါသှားမှာပါ။ ကငျြးယုံရဲ့ သူရဲကောငျးတို့ရဲ့ဒဏ်ဍာရီ ဝါမကျမှနျမွကေခဈြတေးတဈပုဒျလို့ လူသိမြားတဲ့ The Legend of the Condor Heroesကဇာတျကောငျတှကေို ကြောရိုးယူထားတဲ့အတှကျ မကွညျ့ရသေးခငျကတညျးက ရငျးနှီးနမှောပါပဲ။ ဒီရုပျရှငျဟာTimelineအရတော့ တိမျလှာနဂါးသူရဲကောငျးမြားနဲ့ သူရဲကောငျးတို့ရဲ့ ဒဏ်ဍာရီတို့ကွား မရှေးမနှောငျးကာလလောကျမှာပါ။ သူရဲကောငျးတို့ရဲ့ ဒဏ်ဍာရီမှာ ပွောပဲပွောပွီးမပွခဲ့တဲ့ လကျကိုးခြောငျးသူ‌ဖုနျးစားဂိုဏျးခြုပျဟုနျခြီကုနျးရဲ့ လကျတဈခြောငျးပွတျခဲ့ရတဲ့အကွောငျး၊ဓားမကိုငျရတဲ့ အကွောငျး၊အိုးရနျဖုနျနဲ့ သူ့မရီးကွားကဖွဈရပျ၊ ဟှမျ မကျမှနျကြှနျးသခငျဟှမျ မကျမှနျကြှနျးသခငျ ဖွဈလာရတဲ့အကွောငျးအရငျးတို့ကို။ရိုကျပွသှားပါတယျ။အရှပေို့ငျးထိပျသီး မကျမှနျကြှနျးသခငျဟှမျ အနောကျပိုငျးထိပျသီး အဆိပျဘုရငျ အိုးရနျုဖုနျး မွောကျပိုငျးထိပျသီးသူတောငျးစားဂိုဏျခြုပျ ဟုနျခြီကုနျး တို့ရဲ့ ...
Police Academy: Mission to Moscow (1994) The Russians need help in dealing with the Mafia and so they seek help with the veterans of the Police Academy. They head off to Moscow, in order to find evidence against Konstantin Konali, who marketedacomputer game that everyone in the world is playing.
Deadful Melody ( 1994 ) Zawgyi******IMDb 6.3 ရရှိထားတဲ့ ရှေးခေတ်သိုင်းကားဟောင်းလေးတစ်ကားကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘ၀က ရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့သိုင်းကားတွေနဲ့သိပ်မစိမ်းတဲ့သူတွေတော့သဘောကျမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးပါပဲ..Old But Gold ဆိုတဲ့အတိုင်းပြန်လည်ခံစားကြည့်ရှုပါတစ်ခါကသိုင်းလောကကိုသွေးလွှမ်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလွန်တရာမှစွမ်းအားကြီးတဲ့ထျန်းမှော်ဗျပ်စောင်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်...အဲ့ဒီထျန်းမှော်ဗျပ်စောင်းကိုသိုင်းလောကသားတွေအချင်းချင်းလုကြရင်းတစ်နေ့သိုင်းလောကကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ထျန်းလုံဂိုဏ်းသားဟွမ်တုန်းဆီထျန်းမှော်ဗျပ်စောင်းရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်...အဲ့ဒီမှာပဲဗျပ်စောင်းကိုလာလုယူတဲ့သိုင်းလောကသားတွေနဲ့အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး ထျန်းမှော်ဗျပ်စောင်းကိုဟွမ်တုန်းကငယ်ရွယ်တဲ့သမီးဖြစ်သူရှောင်ရွယ်ဆီပေးခဲ့ပါတယ်...အဖေ အမေမောင်လေးနဲ့ပါခွဲခဲ့ရတဲ့ရှောင်ရွယ်ကဗျပ်စောင်းကိုလာလုတဲ့လူတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဗျပ်စောင်းနဲ့အတူချောက်ကမ်းပါးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်....အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသိုင်းလောကကခဏတာအေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်....မထင်မှတ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် ထျန်းမှော်ဗျပ်စောင်းကသိုင်းလောကထဲတစ်ဖန်ပြန်ထွက်ပေါ်လာသောအခါအရင်ကလိုမျိုးသိုင်းလောကကြီးမှာသွေးမုန်တိုင်းပြန်ထန်သွားဦးမလားဆိုတာ.ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်....... Unicode*******IMDb 6.3 ရရှိထားတဲ့ ရှေးခတျေသိုငျးကားဟောငျးလေးတဈကားကိုပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျကြှနျတျောတို့ငယျဘဝက ရိုကျကူးခဲ့ကွတဲ့သိုငျးကားတှနေဲ့သိပျမစိမျးတဲ့သူတှတေော့သဘောကမြယျ့ဇာတျကားမြိုးပါပဲ..Old But Gold ဆိုတဲ့အတိုငျးပွနျလညျခံစားကွညျ့ရှုပါတဈခါကသိုငျးလောကကိုသှေးလှမျးအောငျလုပျနိုငျခဲ့တဲ့အလှနျတရာမှစှမျးအားကွီးတဲ့ထနျြးမှျောဗပျြစောငျးတဈခုရှိခဲ့တယျ...အဲ့ဒီထနျြးမှျောဗပျြစောငျးကိုသိုငျးလောကသားတှအေခငျြးခငျြးလုကွရငျးတဈနသေို့ငျးလောကကနနှေုတျထှကျသှားပွီဖွဈတဲ့ထနျြးလုံဂိုဏျးသားဟှမျတုနျးဆီထနျြးမှျောဗပျြစောငျးရောကျဖို့အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ...အဲ့ဒီမှာပဲဗပျြစောငျးကိုလာလုယူတဲ့သိုငျးလောကသားတှနေဲ့အကွီးအကယျြတိုကျခိုကျပှဲတှဖွေဈပွီး ထနျြးမှျောဗပျြစောငျးကိုဟှမျတုနျးကငယျရှယျတဲ့သမီးဖွဈသူရှောငျရှယျဆီပေးခဲ့ပါတယျ...အဖေ အမမေောငျလေးနဲ့ပါခှဲခဲ့ရတဲ့ရှောငျရှယျကဗပျြစောငျးကိုလာလုတဲ့လူတှကေိုရှောငျရငျးနဲ့ဗပျြစောငျးနဲ့အတူခြောကျကမျးပါးအောကျကိုပွုတျကသြှားခဲ့ပါတယျ....အဲ့ဒီအခြိနျကစပွီးသိုငျးလောကကခဏတာအေးခမျြးသှားခဲ့ပါတယျ....မထငျမှတျပဲနှဈပေါငျးမြားစှာကွာပွီးနောကျ ထနျြးမှျောဗပျြစောငျးကသိုငျးလောကထဲတဈဖနျပွနျထှကျပျေါလာသောအခါအရငျကလိုမြိုးသိုငျးလောကကွီးမှာသှေးမုနျတိုငျးပွနျထနျသှားဦးမလားဆိုတာ.ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစနေျော....... Translated & Review By XiaoEncoded By LK
Deadful Melody ( 1994 )
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) (Unicode)ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ သတငျးထောကျတဈယောကျကနေ ဗငျပိုငျးယားတဈကောငျကို အငျတာဗြူးတဲ့ဇာတျလမျးလေးပါ။ဗငျပိုငျးယားဇာတျကားဆိုပမေယျ့ သှေးသံတရဲရဲနဲ့ Horror အငှအေ့သကျပွညျ့နမေယျ့ဇာတျကားမြိုးတော့မဟုတျပါဘူး။ဗငျပိုငျးယားတဈကောငျ သူ့ရဲ့ထာဝရသကျတမျးတဈလြှောကျမှာ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ သံယောဇဉျ၊ အခဈြ၊ သစ်စာဖောကျမှု၊ အထီးကနျြမှု နဲ့သှေးဆာမှုတှအေကွောငျး သာမနျလူတဈယောကျကို ပွနျပွောငျးရငျဖှငျ့ပွတဲ့ Drama ဇာတျကားမြိုးပါ။ဒီဇာတျကားထဲက Cast List ကလဲ ထိပျထိပျကွဲတှပေါပဲ။သတငျးထောကျအဖွဈက Christian Slaterအဓိကဇာတျဆောငျ ဗငျပိုငျးယားနှဈကောငျအဖွဈကတော့ Tom Cruise နဲ့ Brad Pitt တို့အပွငျAntonio Banderas နဲ့ကလေးသရုပျဆောငျကတော့ Spider-Man Trilogy ရဲ့ မငျးသမီးခြော Kirsten Dunst တို့ပဲဖွဈပါတယျ။(ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျသူကတော့ ကို ဟိနျးမငျးထှနျးပါ) (Zawgyi)ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကနေ ဗင်ပိုင်းယားတစ်ကောင်ကို အင်တာဗျူးတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ဗင်ပိုင်းယားဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် သွေးသံတရဲရဲနဲ့ Horror အငွေ့အသက်ပြည့်နေမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗင်ပိုင်းယားတစ်ကောင် သူ့ရဲ့ထာဝရသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သံယောဇဉ်၊ အချစ်၊ သစ္စာဖောက်မှု၊ အထီးကျန်မှု နဲ့သွေးဆာမှုတွေအကြောင်း သာမန်လူတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောင်းရင်ဖွင့်ပြတဲ့ Drama ဇာတ်ကားမျိုးပါ။ဒီဇာတ်ကားထဲက ...
Three Colours: White (1994) Three Colours: White (1994) IMDb - 7.6/10_____Rotten - 87% ပွငျသဈစကားမတတျတဲ့ ကာရိုလျဆိုတဲ့ကောငျလေးနဲ့ ဒိုမနဈလို့ချေါတဲ့ပွငျသဈကောငျမလေး ခဈြကွိုကျမိကာ လကျထပျကွဖို့အကွောငျးဖနျလာပါတယျ အလုပျမရှိ လူရာမဝငျ စကားသခြောမပွောတတျတဲ့ ကာရိုလျနဲ့ ရရှေညျမဖွဈမှနျးသိတဲ့အခါမှာတော့ လကျထပျပွီးခွောကျလအကွာမှာပဲ ကှာရှငျးဖို့ဖွဈလာပါတယျ ကောငျလေးကိုတရားရုံးကဖွရှေငျးပေးပမေယျ့ စကားမတတျ ရှနေ့မေရှိတော့ အမှုရှုံးပွီး ကိုယျ့ဌာနကေိုယျပွနျခဲ့ရပါတယျ ဒီလိုနဲ့ သူကွိုးစားပွီး အရမျးခမျြးသာလာတဲ့တနမှေ့ာ ကောငျမလေးကိုဘယျလိုပွနျဆကျဆံမလဲဆိုတာ... ပြင်သစ်စကားမတတ်တဲ့ ကာရိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ဒိုမနစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ်ကောင်မလေး ချစ်ကြိုက်မိကာ လက်ထပ်ကြဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ် အလုပ်မရှိ လူရာမ၀င် စကားသေချာမပြောတတ်တဲ့ ကာရိုလ်နဲ့ ရေရှည်မဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့ လက်ထပ်ပြီးခြောက်လအကြာမှာပဲ ကွာရှင်းဖို့ဖြစ်လာပါတယ် ကောင်လေးကိုတရားရုံးကဖြေရှင်းပေးပေမယ့် စကားမတတ် ရှေ့နေမရှိတော့ အမှုရှုံးပြီး ကိုယ့်ဌာနေကိုယ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သူကြိုးစားပြီး အရမ်းချမ်းသာလာတဲ့တနေ့မှာ ကောင်မလေးကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်ဆံမလဲဆိုတာ... File Size : (1.2 GB) Quality : Blu-Ray 1080p Running Time : 1h 38min Format : Mp4 Genre : Comedy, Drama, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Bluray.1080p.x264-RSG Translated by Noe Encoded by sithu
Three Colours: Red (1994) Three Colours: Red (1994) IMDb - 8.1/10_____Rotten - 100% အခြိနျပိုငျးမျောဒယျကောငျမလေး ဗယျလယျတိုငျးဟာ မျောဒယျဒိုငျအဖွဈလုပျကိုငျခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ အိမျနီးနားခငျြးအဖွဈကနစေတငျရငျးနှီးလာပါတော့တယျ အဲ့နောကျမှာတော့မျောဒယျဒိုငျဟောငျးကနခှေေးလေးကိုလကျဆောငျပေးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ဗယျလယျတိုငျးရဲ့ရညျးစားဟာသဝနျတိုပွီးအတငျးပွနျပေးခိုငျးခဲ့ပါတယျ ဗယျလယျတိုငျးဟာခှေးကိုပွနျပေးဖို့ထိုသူရဲ့အိမျကိုသှားတဲ့အခါမှာတော့အိမျနီးနားခငျြးတှေ ဖုနျးပွောတာကိုခိုးနားထောငျနတေဲ့မျောဒယျဒိုငျဟောငျးနဲ့ပကျပငျးတိုးပါတော့တယျ ဗယျလယျတိုငျးဟာဒေါသထှကျပွီးစကားနိုငျလုပွောရငျး ခပျကွောငျကွောငျသံယောဇဉျတဈခုကိုအတူရှာတှသှေ့ားတဲ့အခါမှာတော့... အချိန်ပိုင်းမော်ဒယ်ကောင်မလေး ဗယ်လယ်တိုင်းဟာ မော်ဒယ်ဒိုင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းအဖြစ်ကနေစတင်ရင်းနှီးလာပါတော့တယ် အဲ့နောက်မှာတော့မော်ဒယ်ဒိုင်ဟောင်းကနေခွေးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဗယ်လယ်တိုင်းရဲ့ရည်းစားဟာသ၀န်တိုပြီးအတင်းပြန်ပေးခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဗယ်လယ်တိုင်းဟာခွေးကိုပြန်ပေးဖို့ထိုသူရဲ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့အိမ်နီးနားချင်းတွေ ဖုန်းပြောတာကိုခိုးနားထောင်နေတဲ့မော်ဒယ်ဒိုင်ဟောင်းနဲ့ပက်ပင်းတိုးပါတော့တယ် ဗယ်လယ်တိုင်းဟာဒေါသထွက်ပြီးစကားနိုင်လုပြောရင်း ခပ်ကြောင်ကြောင်သံယောဇဉ်တစ်ခုကိုအတူရှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့... File Size : (1.3 GB) Quality : Blu-Ray 1080p Running Time : 1h 39min Format : Mp4 Genre : Drama, Mystery, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Bluray.1080p.x264-RSG Translated by Hnyot Myet Wunn Encoded by sithu
Four Weddings andaFuneral (1994) "ပထမမင်္ဂလာဆောင်" ကိုယ်က အနှောင်အဖွဲ့ကိုကြောက်တတ်တဲ့ လွတ်လပ်သူပေါ့။ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ရန်သူဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ဒီမင်္ဂလာပွဲမှာ ကိုယ်မင်းကို ပထမဆုံးစတွေ့ခဲ့တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုတာ အိပ်နေရတာလောက် မကောင်းဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ ကိုယ်...အဲဒီနေ့မှာအချစ်ဆိုတာကို ပါးပါးလေး စတွေ့မိခဲ့တယ်။ မင်းအရမ်းလှနေတယ်။ ကိုယ်တို့ အတူ ကြည်နူးစရာညတစ်ညကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ရိုးရိုးလေးပဲ နှစ်ဦးသဘောတူ ခွဲခွာခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ်တို့ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားမှာကို သိရက်နဲ့တောင်မှပေါ့။ "ဒုတိယမင်္ဂလာဆောင်" ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုလည်း ကိုယ်နောက်ကျပြန်ပြီ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ သတို့သားဖြစ်မယ့် အခွင့်အရေးမှာလည်း နောက်ကျခဲ့ရပြီ။ ပြီးတော့ ဒီမင်္ဂလာဆောင်တွေကို မုန်းတတ်လာပြီ။ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်မှာ မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ကြည်နူးစရာညတစ်ညရခဲ့တယ်။ ဒီလိုညမျိုး ဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့အတူ ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာ ကျိတ်ငိုခဲ့ရတယ်။ "တတိယမင်္ဂလာဆောင်" ကိုယ်အမုန်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပေါ့။ ကိုယ် မင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပွင့်လင်းပြခဲ့ပေမဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်လာတာကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက တခြားသူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတာကို ကြည့်ရတာ အချစ်အပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှု ကိုယ့်နှလုံးသားလို တစ်စစီ ကြေမွသွားခဲ့တယ်။ "သေဆုံးခြင်း" ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ နှလုံးသားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ...
Beverly Hills Cop III (1994) တစ်ခါတစ်လေမှာ ဂုဏ်သရေအရှိဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ရက်စက်တဲ့ရာဇ၀တ်ကောင်ဖြစ်နေတက်သလို ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေနေရာတစ်ခု ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကြောက်စရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတက်ပါတယ်။ အသက်ရှင်စဉ်မှာအမြဲကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးဆရာသမားကိုဆုံးရူံးလိုက်ရတဲ့အတွက် Alex Foley တစ်ယောက် အဲ့ဒီလူသတ်ကောင်ကိုမဖြစ်မနေလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကားလုံးရယ်နေရမှာသေချာတဲ့ ရဲဇာတ်မြူးကားလေးပါ။ ရုပ်ရှင်ကားကို Archi Thang Gyi မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်
Kabhi Haan Kabhi Naa(1994) Kabhi Haan Kabhi Naa(1994) ==================================== "ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်းသာဆိုဟောဒီအိပ်မက်ထဲကလုံးဝကိုမနိုးထချင်တော့ပါဘူး" "ကြယ်တွေကြွေတိုင်းဘုရားထံတောင်းတဲ့ဆုကမင်းအချစ်ရရှိဖို့ပါ" ဟောဒီလောကမှာသူရဲကောင်းတွေရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဘယ်လောက်ထိတောင်ကြားသိဖူးပြီးသွားပြီလဲ အရှုံးသမားတွေရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေရောသိကြရဲ့လား တဖွဲ့တနွဲ့ရေးတဲ့သူတွေရောရှိပါ့မလား လောကမှာဟီးရိုးတွေအတွက်သာခမ်းနားတဲ့အချစ်ဇာတ်ရှိပြီး ဇီးရိုးတွေအတွက်ရောရှိပါ့မလား ဘယ်သူကရောရေးဖွဲ့လို့ဘယ်သူကရောအချိန်ပေးဖတ်ရှု့မှာလဲ အခုဇာတ်လမ်းလေးကလည်းဒီလိုပါပဲ အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဇီးရိုးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ့ ဘယ်လောက်ဇီးရိုးကျလဲဆိုရင် မိသားစုထဲမှာမျက်နှာကောင်းမရ အပေါင်းသင်းကြားထဲမှာမျက်နှာငယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရှေ့မှာခေါင်းမမော့နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်း သူ့နာမည်ကတော့ဆူနီးလ်တဲ့ ဟုတ်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်မယ်မယ်ရရမရှိ ပညာရေးကျတော့လည်းစာမေးပွဲ၃နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ ဘာထူးခြားတာများရှိလဲ အများနဲ့မတူထူးခြားတာဆိုလို့တေးဂီတ ဆူနီးလ်ဟာတေးဂီတပိုင်းမှာတော့ပါရမီရှိသူတစ်ဦး ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တော့အောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူး သူ့မှာတဖက်သတ်စိတ်ဝင်စားနေရတဲ့အန္နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် အန္နာဟာဆူနီးလ်ကိုတော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပဲသဘောထားပြီး သူတို့အဖွဲ့ထဲကခရစ်ကိုတော့ရင်ခုန်နေပုံပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆူနီးလ်နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်ခရစ်ဟာအဖက်ဖက်ကအပုံကြီးသာနေလေတယ် ပညာအရည်အချင်း အလုပ်အကိုင် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းအသိုင်းအဝိုင်း ဒီလိုအခြေနေမှာဆူနီးလ်တစ်ယောက်အန္နာ့အချစ်ကိုရပါ့မလား...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Zaw Htooပဲဖြစ်ပါတယ်... File Size : (1.1 GB) and (399MB) Quality : Web-DL720P, Format…mp4 Duration…02:38:00 Genre : Drama, Music,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Zaw Htoo Encoded by Phyo Pyae
Kabhi Haan Kabhi Naa(1994)
Speed (1994) Speed (1994) IMDb - 7.2/10_____Rotten - 94%Won2Oscars. Another 17 wins & 20 nominations. (Unicode)Action ကားကောငျးကောငျးကွိုကျသူတို့အတှကျ ပွနျလညျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ Speed ဇာတျကားဟာ 1994 ခုနှဈမှာထှကျရှိခဲ့ပွီး မငျးသား Keanu Reeves နဲ့ Sandra Bullockတို့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျပွီး IMDb 7.2 ရရှိခဲ့ပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဂကျြ ထရဗေနျဟာ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈယောကျ..တရကျမှာ ခရီးသညျတဈစု ဗုံးနဲ့ထောငျခြောကျဆငျဖမျးလို့ ခကျခကျခဲခဲ ကယျနိုငျခဲ့ရပါတယျ..ဗုံးထောငျတဲ့လူကလညျး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျဟောငျး.တဈဦး ဗုံးကို အထူးကြှမျးကငျြသူ သူပငျစငျယူခဲ့တဲ့ကိစ်စမှာ မကနြေပျလို့ အခုလို ဓါးစားခံဖမျးပွီး ဗုံးထောငျငှညှေပျတာမအောငျမွငျတော့ ဂကျြထရဗေနျကိုအညိုးထားပါတော့တယျ နောကျဆုံး ခရီးသညျတငျဘတျကားကိုဗုံးထောငျပွီး ငှထေပျညှဈတဲ့အခါမှာတော့..ဘယျလိုတှဆေကျကွုံရမလဲ ဆိုတာကို ဆကျလကျခံစားကွညျ့ပါ (Zawgyi)Action ကားကောင်းကောင်းကြိုက်သူတို့အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Speed ဇာတ်ကားဟာ 1994 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး မင်းသား Keanu Reeves နဲ့ Sandra Bullockတို့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ပြီး IMDb 7.2 ရရှိခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျက် ထရေဗန်ဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်..တရက်မှာ ခရီးသည်တစ်စု ဗုံးနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းလို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်နိုင်ခဲ့ရပါတယ်..ဗုံးထောင်တဲ့လူကလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း.တစ်ဦး ဗုံးကို အထူးကျွမ်းကျင်သူ သူပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာ မကျေနပ်လို့ အခုလို ဓါးစားခံဖမ်းပြီး ဗုံးထောင်ငွေညှပ်တာမအောင်မြင်တော့ ဂျက်ထရေဗန်ကိုအညိုးထားပါတော့တယ် နောက်ဆုံး ခရီးသည်တင်ဘတ်ကားကိုဗုံးထောင်ပြီး ငွေထပ်ညှစ်တဲ့အခါမှာတော့..ဘယ်လိုတွေဆက်ကြုံရမလဲ ဆိုတာကို ...
Fist of Legend ( 1994 ) 1994 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဂျက်လီရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ခေတ်ကာလအနေအထားနဲ့ဆိုရင်ဂျပန်တွေတရုတ်ပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကာလပါချန်ကျန်းက တရုတ်ကနေ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးပေါ့ ..တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့သူက ကွန်ဖူးကျောင်းတခုမှနေထိုင်ပါတယ်တနေ့မှာ သူ့ဆရာဖြစ်သူ လက်သီးဘုရင်ဆရာဟူဟာသိုင်းပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်..သူ့ဆရာရှုံးခဲ့တဲ့သူကိုသူစိန်ခေါ်ပြီးပြန်တိုက်တဲ့အခါ အလွယ်တကူပဲနိုင်သွားတော့ ဆရာရဲ့သေဆုံးမှု ကိုသံသယဖြစ်ပြီးလက်လံစစ်ဆေးရာကနေ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုတွေကိုတွေ့ရှိရပါတော့တယ်..ဒီဇာတ်ကားမှာချန်ကျန်းတစ်ယောက် ညီအကိုသံယောဇဉ် နဲ့တိုင်းပြည်သားကောင်းတာဝန်တွေနဲ့အပြင် ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ပါ ချစ်ကျွမ်းဝင်မိခဲ့တော့အခက်အခဲတွေကြုံရပုံ.ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားမလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ
Fist of Legend ( 1994 )
Chungking Express (1994) Chungking Express (1994) IMDb 8.1/10, Rotten Tomatoes 87% ဝမျကာဝကေ သူရိုကျခဲ့ဖူးသမြှရုပျရှငျတှထေဲမှာ အခြိနျအပေးရဆုံးနဲ့ အခကျခဲဆုံးဖွဈတဲ့ Ashes of Time (1994) ရဲ့ နောကျဆုံးအဆငျ့ Post Production တှလေုပျကိုငျနဆေဲမှာ သူ့ Production အတှကျ၊ သူ စိတျပွလေကျပြောကျဖွဈဖို့အတှကျဆိုပွီး Chungking Express ရုပျရှငျကားကို ၃ လအတှငျးအပွီးသတျရိုကျကူးပွသခဲ့တယျ။"ကြှနျတျော Ashes of Time ရဲ့ Post Production တှကေနေ ခဏအနားယူခငျြခဲ့တယျ၊ အဲ့ဒါနဲ့ ဒီ Chungking Express ကိုရိုကျဖွဈသှားတာပဲ။ ဒီရုပျရှငျမှာ ဇာတျညှနျးလညျးအတညျတကမြရှိပါဘူးဗြာ....ရိုကျကှငျးမစခငျည ဒါမှမဟုတျ ရိုကျမယျ့မနကျမှ လကျတနျးခရြေးပွီး ရိုကျလိုကျတာပဲဗြ။" - ဝမျကာဝဒေီရုပျရှငျရဲ့ Theme က ပွောရခကျတယျ။ နီယှနျမီးရောငျတှနေဲ့ အတုအယောငျတှပွေညျ့နှကျနတေဲ့ ဟောငျကောငျမွို့ပွညအခြိနျတှကေို အခွခေံတဲ့ ပထမဇာတျလမျးနဲ့ Chungking Mansion ရဲ့ ...
The Dragon Chronicles: The Maidens of Heavenly Mountain (1994) The Dragon Chronicles: The Maidens of Heavenly Mountain (1994) IMDb - 6.0/10 တရုတျသိုငျးလောကရဲ့ အလှထိပျခေါငျ မငျးသမီးတှဖွေဈတဲ့ Gong Li , Sharla Cheung , Brigitte Lin တို့ သုံးယောကျကို တပွိုငျတညျး တှမွေ့ငျရမယျ့ ဇာတျကားပါ။ IMDb Rating (6/10) ရရှိထားပွီး Fantasy/Action/Adventure ဇာတျကားအမြိုးအစားပါ။ သိုငျးလောကသားတှေ နှဈသကျမယျ့ သိုငျးကှကျ၊ဇာတျကှကျတှနေဲ့မို့ သိုငျးလောကသားမှနျရငျ လကျလှတျမခံသငျ့ပါဘူး။ File size…(900 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:36:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by YMA & Ying Ying
The Dragon Chronicles: The Maidens of Heavenly Mountain (1994)
Legends of the Fall(1994) Legends of the Fall(1994) IMDb....7.5 ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးတယ်... ခေါင်းစဉ် စာရေးသူကိုမမှတ်မိပေမယ့် သင့်အနားမှာ ကြိုးတစ်ချောင်းကို မထားပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ရေးဖွဲ့ထားတာတော့ မှတ်မိတယ်... နှောင်ဖွဲ့မှုတွေများလာတဲ့အခါ လောကကြီးမှာ မလူးသာမလွန့်သာတဲ့အဖြစ် အကြောင်းလေးကိုရေးဖွဲ့ထားတာပါ..သို့ပေမယ့်လည်း အရွယ်ရောက်လာတော့ လောကကြီးနဲ့ မိမိဆက်သွယ်ထားဖို့ ကြိုးလေးတွေလိုအပ်ကြောင်းသိလာတယ်... ဒီကြိုးတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံအင်အားသိပ်ကောင်းတယ် ...ငါသူ့အတွက်အသက်ရှင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြီးမားဆုံး စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တာကိုးးး... Legends of the Fall ဆိုတဲ့ကားမှာတော့ ဖခင်နှင့် သားသမီးတွေကြားက ဆက်သွယ်ထားတဲ့ မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့ကြိုးအကြောင်းကိုရိုက်ပြထားပါတယ်. ဖခင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Anthony Hopkins ကိုတော့ Silence of the Lambs မှာအော်စကာရခဲ့ သဘာဝမင်းသားကြီးကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ Brad Pitt ကတော့ ဒီကားဟာသူရဲ့ပထမဆုံးမင်းသား သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်. ..Anthony Hopkins ကိုတော့ ထူးပြီးချီးကျူးစရာမလိုပေမယ့် တက်သစ်စမင်းသား Brad Pittကတော့ ဒီကားမှာပဲ နာမည်ကြီးသွားတယ်... ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ William မှာ သား(၃)ယောက်ရှိတယ်. ..သူ့သား(၃)ယောက်ကို အစိုးရ၀န်ထမ်း မဖြစ်စေချင်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသက်မွေးနေထိုင်စေချင်တယ်. ..သားအလတ်ဖြစ်သူ Brad Pitt ကတော့ ညီအကိုထဲမှာ တမူကွဲထွက်နေတယ်. ..ဖခင်ရဲ့လူယုံတော် အင်ဒီးယန်းလူမျိုးမိသားစုထဲမှာကြီးပျင်းပြီး အမဲလိုက်သည်ကိုနှစ်ခြိုက်သည်. ..ခပ်ကြမ်းလူငယ်ငယ်တစ်ယောက်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်... ပထမ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ ဖခင်ရဲ့ ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ပြီး သား(၃)ယောက်လုံးစစ်ထဲဝင်သွားခဲ့သည်.... ဒီကားဟာ သိပ်ကိုကောင်းလွန်းတဲ့ Drama, Romance, War ဇာတ်ကားအမျိုးအစားပါ... ...Spoiler ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်ပဲညွှန်းဆိုပါရစေ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး.... File Size ...